मुटुरोगबाट यसरी जोगिन सक्छ, अपनाउनुहोस् यी १५ उपाय – Saurahaonline.com
मुटुरोगबाट यसरी जोगिन सक्छ, अपनाउनुहोस् यी १५ उपाय
९. रक्सी पिउँदा उच्च रक्तचापको समस्या तथा डाईलेटेड कार्डियोमायोप्याथी जस्ता मुटुका समस्या निम्त्याउन सक्छन्।
१५. शरीरमा होमोसिस्टिनको मात्रा बढ्दा पनि हृदयाघात तथा मस्तिस्काघातको समस्या बढ्छ । यो समस्या यात जन्मजात रुपमा देखिन्छ या भिटामिन बि ६ तथा भिटामिन बि १२ को कमीमा देखिन्छ । तसर्थ यसको उपचार वा रोकथाम गर्नुपर्छ ।स्वास्थ्य खबरबाट